မန်ယူအသင်းမှာ အောင်မြင်မှုရယူခဲ့ကြတဲ့ ပြည်ပ ကစားသမားများ အပိုင်း(၂)
19 Oct 2018 . 6:40 PM
၅. ဆိုးလ်ရှား Ole Gunnar Solskjaer
ကစားသမားဘ၀မှာ “ကလေးမျက်နှာနဲ့ လူသတ်သမား” ( ‘Baby-Faced Assassin’)လို့ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ ဆိုးလ်ရှားဟာ Super Sub အဖြစ်သာ ကစားခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် မန်ယူအသင်းရဲ့ ကံကြမ္မာကို အလှည့်အပြောင်းဖြစ်စေတဲ့ ဂိုးတွေကို သွင်းယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးကတော့ ၁၉၉၉ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ဘက်ကို အနိုင်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာပါပဲ။
Honours at the club:6x Premier League,2x FA Cup,2x Community Shield, 1 x UEFA Champions League, 1 x Intercontinental Cup
၄.နစ္စတယ်ရွိုင်း Ruud van nistelrooy
ပြိုင်ဘက် ပယ်နယ်တီဧရိယာ (၆)ကိုက်စည်းထဲမှာ Danger အဖြစ်ဆုံး ကစားသမားဆိုရင် နစ္စတယ်ရွိုင်းကိုပဲ ညွှန်းဆိုရမှာပါ။ သူ့ကို ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးအဖြစ်လည်း ဗြိတိန်မီဒီယာတွေက သတ်မှတ်ထားကြတယ်။ Off-the-ball movement ၊ ပြိုင်ဘက်ဂိုးဧရိယာထဲမှာ နေရာယူကောင်းမွန်မှု စတဲ့အရည်အချင်းနဲ့ ပြည့်စုံသူ နစ္စတယ်ရွိုင်းဟာ ဖာဂူဆန် Ferguson ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူးတွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအ၀င်ပါပဲ။
Honours at the club: 1 x Premier League. 1 x FA Cup, 1 x EFL Cup, 1 x Community Shield
၃.ရှမိုက်ကယ် Peter Schmeichel
ဒိန်းမတ်က လူ့ဘီလူးကြီး ပီတာရှမိုက်ကယ်ကတော့ မန်ယူပရိသတ်တွေ အသည်းစွဲဂိုးသမားတစ်ဦးပါပဲ။ အသင်းကို လွှမ်းမိုးနိုင်တာ၊ ဒေါသကြီးတာ၊ နိုင်လိုစိတ်ပြင်းထန်တာတွေက ရှမိုက်ကယ်ရဲ့ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အချင်းဖြစ်ပြီး ဂိုးပေါက်ကို တံတိုင်းကြီးသဖွယ် ကာကွယ်နိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်လာရင် ရှေ့တက်ပြီး ဂိုးသွင်းဖို့ ကြိုးစားတတ်တဲ့ ရှမိုက်ကယ်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေက အခုအချိန်အထိ လွမ်းမောတမ်းတနေရဆဲပါ။
Honours at the club:5x Premier League,3x FA Cup, 1 x EFL Cup,4x Community Shield, 1 x UEFA Champions League, 1 x UEFA Super Cup
၂. စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo
ဖာဂူဆန် ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေထဲမှာ အသင်းကို အကျိုးပြုနိုင်ဆုံး ကစားသမားလို့ ဆိုရမယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ မန်ယူကစားသမားတွေထဲမှာ ဖီဖာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ပထမဆုံးရယူခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒို မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း မန်ယူအသင်းမှာ နံပါတ်(၇)ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက မှေးမှိန်သွားတာ ကြာမြင့်နေပါပြီ။
Honours at the club:3x Premier League, 1 x FA Cup,2x EFL Cup, 1 x Community Shield, 1 x UEFA Champions League, 1 x FIFA Club World Cup
၁.အဲရစ်ကန်တိုနာ Eric Cantona
ဒီစာရင်းမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ကျော်ပြီး ကန်တိုနာက ထိပ်ဆုံးဖြစ်နေတာက Controversial ဖြစ်ပေမယ့်လည်း လက်မခံနိုင်လောက်စရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကန်တိုနာက မန်ယူအသင်း အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်ရောက်လာအောင် ထမ်းတင်ပေးသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ပဉ္စလက်ဆန်ဆန် ကန်ချက်တွေနဲ့ သွင်းဂိုးတွေက အခုအချိန်အထိ အမှတ်ရစရာဖြစ်နေဆဲပါ။ ထိပ်တန်းအဆင့်ခြေစွမ်း ရှိပေမယ့် ခပ်ညစ်ညစ် စရိုက်ရှိတဲ့သူ၊ ပြိုင်ဘက်ပရိသတ်ကို Kung Fu Kick နဲ့ ခြေစွမ်းပြမိလို့ ပွဲပယ်ခံခဲ့ရသူ စတဲ့ မှတ်တမ်းဆိုးတွေလည်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
Honours at the club:4x Premier League,2x FA Cup,3x Community Shield
မန်ယူအသင်းမှာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ပြည်ပကစားသမားတွေထဲက ကျန်တဲ့ (၅)ဦးကို အပိုင်း(၂)အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး မန်ယူပရိသတ်တွေနဲ့ အကြိုက်တူလိမ့်မယ်လို့ ယူဆကြောင်းပါ . . .
Photo:The18,The Sun,Manchester Evening News,Goal.com,The42,Getty Images
မနျယူအသငျးမှာ အောငျမွငျမှုရယူခဲ့ကွတဲ့ ပွညျပ ကစားသမားမြား အပိုငျး(၂)
၅. ဆိုးလျရှား Ole Gunnar Solskjaer
ကစားသမားဘဝမှာ “ကလေးမကျြနှာနဲ့ လူသတျသမား” ( ‘Baby-Faced Assassin’)လို့ ထငျရှားခဲ့တဲ့ ဆိုးလျရှားဟာ Super Sub အဖွဈသာ ကစားခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့ မနျယူအသငျးရဲ့ ကံကွမ်မာကို အလှညျ့အပွောငျးဖွဈစတေဲ့ ဂိုးတှကေို သှငျးယူခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ အထငျရှားဆုံးကတော့ ၁၉၉၉ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲမှာ ဘိုငျယနျမွူးနဈဘကျကို အနိုငျဂိုးသှငျးယူခဲ့တာပါပဲ။
၄.နစ်စတယျရှိုငျး Ruud van nistelrooy
ပွိုငျဘကျ ပယျနယျတီဧရိယာ (၆)ကိုကျစညျးထဲမှာ Danger အဖွဈဆုံး ကစားသမားဆိုရငျ နစ်စတယျရှိုငျးကိုပဲ ညှနျးဆိုရမှာပါ။ သူ့ကို ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံးတိုကျစဈမှူးတဈဦးအဖွဈလညျး ဗွိတိနျမီဒီယာတှကေ သတျမှတျထားကွတယျ။ Off-the-ball movement ၊ ပွိုငျဘကျဂိုးဧရိယာထဲမှာ နရောယူကောငျးမှနျမှု စတဲ့အရညျအခငျြးနဲ့ ပွညျ့စုံသူ နစ်စတယျရှိုငျးဟာ ဖာဂူဆနျ Ferguson ချေါယူခဲ့တဲ့ ထိပျတနျးတိုကျစဈမှူးတှထေဲမှာ တဈဦးအပါအဝငျပါပဲ။
၃.ရှမိုကျကယျ Peter Schmeichel
ဒိနျးမတျက လူ့ဘီလူးကွီး ပီတာရှမိုကျကယျကတော့ မနျယူပရိသတျတှေ အသညျးစှဲဂိုးသမားတဈဦးပါပဲ။ အသငျးကို လှမျးမိုးနိုငျတာ၊ ဒေါသကွီးတာ၊ နိုငျလိုစိတျပွငျးထနျတာတှကေ ရှမိုကျကယျရဲ့ ထူးခွားကောငျးမှနျတဲ့ အရညျအခငျြးဖွဈပွီး ဂိုးပေါကျကို တံတိုငျးကွီးသဖှယျ ကာကှယျနိုငျသူလညျးဖွဈပါတယျ။ လိုအပျလာရငျ ရှတေ့ကျပွီး ဂိုးသှငျးဖို့ ကွိုးစားတတျတဲ့ ရှမိုကျကယျရဲ့ ပုံရိပျတှကေ အခုအခြိနျအထိ လှမျးမောတမျးတနရေဆဲပါ။
၂. စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo
ဖာဂူဆနျ ချေါယူခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှထေဲမှာ အသငျးကို အကြိုးပွုနိုငျဆုံး ကစားသမားလို့ ဆိုရမယျ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ မနျယူကစားသမားတှထေဲမှာ ဖီဖာကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ကစားသမားဆုကို ပထမဆုံးရယူခဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒို မရှိတော့တဲ့နောကျပိုငျး မနျယူအသငျးမှာ နံပါတျ(၇)ရဲ့ အခနျးကဏ်ဍက မှေးမှိနျသှားတာ ကွာမွငျ့နပေါပွီ။
၁.အဲရဈကနျတိုနာ Eric Cantona
ဒီစာရငျးမှာ စီရျောနယျလျဒိုကို ကြျောပွီး ကနျတိုနာက ထိပျဆုံးဖွဈနတောက Controversial ဖွဈပမေယျ့လညျး လကျမခံနိုငျလောကျစရာတော့ မဟုတျပါဘူး။ ကနျတိုနာက မနျယူအသငျး အောငျမွငျမှုလမျးကွောငျးပျေါ ပွနျရောကျလာအောငျ ထမျးတငျပေးသူတဈဦးဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ ပဉ်စလကျဆနျဆနျ ကနျခကျြတှနေဲ့ သှငျးဂိုးတှကေ အခုအခြိနျအထိ အမှတျရစရာဖွဈနဆေဲပါ။ ထိပျတနျးအဆငျ့ခွစှေမျး ရှိပမေယျ့ ခပျညဈညဈ စရိုကျရှိတဲ့သူ၊ ပွိုငျဘကျပရိသတျကို Kung Fu Kick နဲ့ ခွစှေမျးပွမိလို့ ပှဲပယျခံခဲ့ရသူ စတဲ့ မှတျတမျးဆိုးတှလေညျး ပိုငျဆိုငျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
မနျယူအသငျးမှာ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ ပွညျပကစားသမားတှထေဲက ကနျြတဲ့ (၅)ဦးကို အပိုငျး(၂)အဖွဈ ဖျောပွခဲ့တာဖွဈပွီး မနျယူပရိသတျတှနေဲ့ အကွိုကျတူလိမျ့မယျလို့ ယူဆကွောငျးပါ . . .